Ga Mianmaa ugbu a bụ “ihe ziri ezi e kwesịrị ime”
Home » Njikọ Mkpakọrịta Akụkọ » Ga Mianmaa ugbu a bụ “ihe ziri ezi e kwesịrị ime”
Ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya na Myanmar ga-achọ igosipụta nkwado ha maka ndị niile gbara ọsọ ndụ na Northern Rakhine State na Bangladesh mgbe nsogbu ndị na-adịbeghị anya dị nso na ókèala Bangladesh. Anyị nwere olile anya na mmadụ niile sitere n’okpukpe ma ọ bụ agbụrụ niile ga-achọta ọnọdụ dị mma ibi na nso nso a.
Myanmar na-agbatị ihe karịrị kilomita 2000 site na ugwu ruo na ndịda ma nwee ọdịdị dị ịtụnanya, ọdịbendị na njem iji nye ndị njem nleta. Ọ bụkwa otu n'ime mba ndị na-anabata ndị nwere mmekọrịta enyi na enyi na ụwa ma dịkwa oke nchebe ileta ma ọ bụrụhaala na ị nọ n'ime ebe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na maapụ enyere site na UK Ọzọ Office dị mma njem ma ọ ga - adịrị gị mfe ijikwa izu isii dịka 6% nke saịtị ndị njem ama ama nọ na mpaghara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.!
Anyị na-ekwenye na njem bụ ụzọ dị mma iji jikọọ ndị mmadụ na iweta mmepe na Myanmar niile maka mmadụ niile sitere na agbụrụ ma ọ bụ okpukpe ọ bụla ma anyị na-akpọ ndị njem nleta na mba ụwa niile ka ha gaa Myanmar. Karịsịa ugbu a ọ dị mkpa ịme mkpebi siri ike ma họrọ ịkwado mmadụ niile na mba ahụ. MTM matara na njem nlegharị anya na Myanmar ka dị na nwata ma nwee ike iru naanị ọnụ ọgụgụ ole na ole na ndị mmadụ, mana ọ dị mkpa ịga n'ihu na-emepe emepe ma na-agbasawanye njem nlegharị anya na mba ahụ. Njem nleta na-enye aka n'ụzọ dị ukwuu na mbelata ịda ogbenye (World Tourism Organisation) nakwa dị ka Banklọ Akụ Worldwa si kwuo na “ịda ogbenye adaala n'etiti 2009-2010 na 2015” World Bank - Myanmar mba nnyocha.
Myanmar na-enye ala ebe okpomọkụ, ugwu, ọdọ mmiri, ụlọ nsọ na ọdịnala oge ochie, nri mara mma, ụsọ mmiri na-ekpo ọkụ na ọtụtụ mmadụ na-anabata ndị ọbịa.
Emeputara oru ndi njem na gburugburu obodo dika imaatu Kayah Steeti iji hụ na ndị njem nleta na ndị obodo na-erite uru na ahụmịhe ha.
Anyị na-akpọ ndị mmadụ gburugburu ụwa ka ha kwado mmadụ niile nke agbụrụ, okpukperechi ma ọ bụ agbụrụ niile n'ụzọ udo wee bịa leta Myanmar ugbu a n'ihi na nke a ga-enyere aka belata ịda ogbenye n'akụkụ mba niile ma nyere aka wulite obodo udo na udo na Myanmar.
Mgbasa ozi njem nlegharị anya na Myanmar nwere olile anya na ndị mmadụ si n'akụkụ ụwa niile ga-aga Mianmaa ma mata obodo ahụ na ndị bi na ya maka onwe gị ma bụrụ ndị mmụọ nsọ ga-aga.
Hurricane melite na Hyatt Centric Key West Resort & Spa
Switzerland Belhotel Al Aziziya Makkah na Saudi Arabia na-eme
Kazakhstan's Air Astana na-eme akara afọ 19th
Teknụzụ njem: Nnukwu na Ahịa Njem Arabian
Trafficgbọ njem ndị njem ka dị ala n'ọdụ ụgbọ elu Frankfurt n'April 2021
Ndị America na-akwado enyemaka ezubere maka ụlọ ọrụ nkwari akụ